संसदमा कस्तो छ देउवाको अंकगणित ? – Janasamsad
संसदमा कस्तो छ देउवाको अंकगणित ?
३ श्रावण २०७८, आईतवार १५:३७ मा प्रकाशित
झापा । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको साता दिन नपुग्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंगलबार देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
मंगलबार राति सपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका देउवाले दोस्रोपटक पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।
पहिलो चरणको कार्यसूची सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवालाई ३० दिनसम्मको समय हुँदाहुँदै चार दिनभित्रै विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।
७ जेठमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अस्विकार गरिदिएकी थिइन् ।
१४९ मध्ये कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षका १२, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्षका २३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदले हस्ताक्षर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकृत गरेको दाबीलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो ।
देउवालाई विश्वासको मत दिनबारे दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजित छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष देउवाको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। दुई दिनअघि बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘हामी सरकारको विपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौं। विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘केही साथीहरू सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत निर्णय हुनेछ ।’
सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने ओलीले प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन्। आइतबार बस्ने संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप निर्णय हुनसक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
देउवाले विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमुख भूमिका खेलेका एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिने वा निदने विषयमा ।
प्रतिनिधिसभा पूर्णअवधि चल्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालले बताउँदै आइरहेका छन्। र, त्यसका लागि कम्तिमा रिटमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूले विश्वासको मत दिनैपर्ने हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत देला त ?
नेपाल पक्षका सांसद मेटमणि चौधरी आफूहरू प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने बताउँछन् ।
‘प्रतिगमनविरुद्ध हामीले गरेको संघर्षको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । अर्को सरकार पनि बनेको छ,’ चौधरीले आयोमेलसँग भने, ‘हाम्रो पक्षका सबै सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुहुन्छ ।’
रिटमा २३ जनाले हस्ताक्षर गरे पनि विश्वासको मत दिँदा यो संख्या बढ्नसक्ने उनको दाबी छ । ‘रिटमा २३ जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, अब त्यो संख्या ४० सम्म पुग्नसक्छ,’ चौधरीले भने ।
यता, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले सत्ता पक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको छ । शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता पक्षमा बस्ने निर्णय गर्दै विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा दायर रिटमा १२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि त्यसमा ४ सांसद थप भएको जसपा कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप यादवले बताए ।
यसअघि महन्थ ठाकुर पक्षमा रहेका प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाल र रानी मण्डल आफूहरूकोे पक्षमा आएको यादवले बताए ।
जसपा उपेन्द्र पक्षले विश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसके पनि महन्थ पक्षले निर्णय गर्न बाँकी छ ।
यस्तो छ देउवाको गणित
देउवालाई विश्वासको मतका लागि तत्काल प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको २ सय ७१ सांसदमध्ये १३६ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
कांग्रेसको ६१ र माओवादीसँग ४८ (सभामुखबाहेक) गरी १०९ सांसद पुग्छ। जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ जनाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अहिले यो संख्या बढेर १६ पुगेको यादव पक्षले जनाएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदको संख्या जोड्दा १२५ पुग्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल सत्तापक्षकै गठबन्धनमा छिन्। त्यो अवस्थामा एमाले माधव नेपाल पक्षका १० सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिए देउवा सरकार जोगिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने बताइसकेको छ । आयोमेल
देउवालाई मत दिने एमालेमा नरहने ओली पक्षको भनाई